Dhageyso:-Soomaaliland oo amar dul-dhigtay Ganacsatada Dekadda Berbera | allsaaxo online
Dhageyso:-Soomaaliland oo amar dul-dhigtay Ganacsatada Dekadda Berbera
Maalmihii la soo dhaafay waxaa taagneyd xiisad u dhaxeysay Ganacsatada wax kasoo degsada dekadda Magaalada Barbara iyo Shirkadda Maamusha ee DP World ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta, waxaana xiisadaas soo farageliyay Soomaaliland.
Xiisadaas ayaa salka ku heysay, kadib markii Shirkadda DP World ay kordhisay lacagta laga qaado Ganacsatada wax kasoo degsada dekadda, hayeeshee Ganacsatadu ay taasi diideen.
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo dalxiiska Somaliland, Maxamuud Xasan Sacad (Saajin) ayaa sheegay in Shirkadda DP World usoo gudbiyeen dacwad ah in sara loo qaado lacagaha laga qaado Ganacsatada, hayeeshee Ganacsatadu ay taasi diidan yihiin.
Waxa uu sheegay Wasiirka in sicirka Dollarka uu kor u kacay, balse Shirkadda DP World ee Ganacsatada ka qaadi jireen 7.000 oo ah sarifka halka uu markii hore taagnaa balse dacwada ay soo gudbisay Shirkadda aawgeed laga dhigay in Ganacsatada laga qaado 8.000 oo Shillinka Soomaaliland ah oo Canshuur ahaan ay u bixinayaan.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa istaagay Shaqada Dekadda Magalada Barbara, waxaana Ganacsatada alaabaha kasoo degsada ay ka cabanayeen in canshuurta lagu kordhiyey lamina oga waxa ay ka qaadan doonaan Go’aanka Wasiirka kasoo baxay.
Dhageyso-Somaliland oo ku amartay ganacsatada Berbera in ay qaataan Go’aankii ka soo baxay Shirkadda DP World (1)